Malunga nathi -Yantai Tonghe Precision Industry Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2007, ibekwe kwisixeko Yantai, China.
Yantai Tonghe Precision Industry Co., Ltd. Yasekwa ngonyaka ka-2007, ibekwe kwi Zhifu District, Yantai City, China.
Imveliso yenkampani yile "LUXMAIN", egubungela indawo engaphezulu kwe-8,000 m2, enabasebenzi abangaphezulu kwama-40, kunye neeseti ezingaphezu kwe-100 zezixhobo ezahlukeneyo zokuvelisa kunye nezixhobo zokuvavanya ezinje ngamaziko e-CNC
Ukuthembela kubuchwephesha be-hydraulic, i-LUXMAIN ikakhulu ibandakanyeka kuPhando noPhuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa kweenkqubo zolawulo lwamanzi, iisilinda kunye nokuphakamisa iimoto. Ivelisa kwaye ithengise ngaphezu kwe-8,000 iisilinda zobungcali kunye nangaphezulu kweeseti ezingama-6,000 zezixhobo zokuphakamisa ngonyaka. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kubuchwephesha bezobuchwephesha, Kwimimandla yeeloliwe zikaloliwe, iimoto, oomatshini bokwakha, ishishini ngokubanzi, njl., Imarike isasazwa ikakhulu eYurophu, eMelika, eJapan, eMzantsi Korea, eMzantsi-mpuma Asia naseMbindi Mpuma.
Kwinkqubo yophuhliso, i-LUXMAIN ibisoloko inamathele kwitekhnoloji njengesikhokelo, inkqubo njengesiqinisekiso, kunye nokusetyenziswa ngokungqongqo kwe-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015. Iimveliso zayo eziphambili zidlulisile isiqinisekiso semveliso ye-EU. I-LUXMAIN okwangoku ekuphela komenzi wokuphakamisa eziphathekayo kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda eTshayina kunye nomvelisi woluhlu olupheleleyo lweelifti eziphantsi komhlaba eTshayina. Igqibe ngokulandelelana iseti yokuqala enzima yezorhwebo yesithuthi esahlulahlula iilifti ezihamba phantsi komhlaba kunye noomatshini bokwakha abanzima. Ukuphuhliswa kweqonga lokuphakamisa umhlaba kwindibano linokuphakamisa ubunzima beetoni ezingama-32.
Ngokweshishini kunye neempawu zalo, i-LUXMAIN ihlala ithobela umgaqo ojolise kwimarike kunye nomxholo wophuhliso ngaxeshanye lweemveliso ezisemgangathweni kunye nolwenziwo olungaqhelekanga.
--Yenza nje izicelo, senza konke okunye.
Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Isilinda esibambeleyo esinye, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto,